» “ओली १० बुँदे कार्यान्वयन, गर्ने सर्तवाट, ब्याक भए, यी १० सांसदले ,गर्नेभए, ओलीलाई बाईबाई ? “ओली १० बुँदे कार्यान्वयन, गर्ने सर्तवाट, ब्याक भए, यी १० सांसदले ,गर्नेभए, ओलीलाई बाईबाई ? – हाम्रो खबर
“ओली १० बुँदे कार्यान्वयन, गर्ने सर्तवाट, ब्याक भए, यी १० सांसदले ,गर्नेभए, ओलीलाई बाईबाई ?
“काठमाडौं । एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाएपछि माधव नेपालको पार्टीमा जान नदिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा काडए फाले । एमालेलाई १० बुँदे सहमति अनुसार ०७५ जेठ २मा फर्काउने सहमति गर्छु भन्दै माधव नेपालको पक्षमा रहेका मुख्य १० नेताहरुलाई एमालेमा फर्काउन सफल भए ।”
“सुरु देखि नै माधव नेपालको पक्षमा देखिएका योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका नेताहरुले अन्तिममा माधव नेपाललाई धोका दिएर ओलीलाई साथ दिने निष्कर्षमा पुगे । उनीहरुले पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने मुख्य सर्त राखे । त्यो सर्त मान्ने कुरामा ओली सहमत भएपछि उनीहरु माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा गएनन् । तर एमाले विभाजन रोक्नकै लागि ओलीले चालेको एउटा चाल मात्र भएको अहिले पुष्टि भएको छ ।”
“माधव नेपाललाई धोका दिएर ओलीलाई साथ दिन पुगेका नेताहरु आश्चर्यमा परेका छन् । १० बुम्दे सहमतिबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ब्याक भएका छन् । सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने भनिए पनि ओलीले त्यसमा कुनै चासो नदेखाएपछि नेताहरू चिन्तित बनेका छन् । यता महासचिव इश्वर पोखरेलले पनि अब एमाले जेठ २ को अवस्थामा फर्कन नसक्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइसकेका छन् ।”
“ओलीले सहमति कार्यन्वयन नगर्ने देखेपछि मध्यमार्गी नेताहरू तनावमा देखिएको बताइएको छ । कटुतापूर्ण अन्तरविरोधलाई विधिसम्मत अन्त्य गर्ने, २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने, २०७७ फागुन ४ गतेको निर्णयपछि एमालेमा आएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिई अन्यलाई पुरानै अवस्थामा राख्ने कार्यदलबीच सहमति भएको थियो ।”
“उक्त सहमतिको २ नं। बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ ।”
“माधव पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने नाममा सोही बुँदाका आधारमा एमालेमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चितताको सपना बुन्दै माधव नेपाललाई छोडेर अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिन पुगेका थिए । अध्यक्ष ओलीले बारम्बार १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर जाने विश्वास पनि दिलाएका थिए ।”
“दार्चुला तुइन घटनाका बारेमा बिहिवार निकालिएको वक्तव्यमा पनि प्रचार विभाग प्रमुखका हैसियतमा प्रवक्ता प्रदीप नेपालद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । यसबाट अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सकारात्मक छैनन् भन्ने देखिएको छ ।”
‘मदन भण्डारी’लाई लिएर बादलले गरे’ सनसनि पुर्ण खुलासा’
“साँझको बेला फ्याट्टै, यस्तो खबर,सुन्नु परे पछि माधव -प्रचण्ड पुरै सशंकित”
“देउवाले अर्ली, इलेक्सन, घोषणा, गर्ने मिती नै,तोकियो ,लास्ट डेट कार्तिक १९ “
“तेस्रो धारका नेताहरुसँग आँट र वि,द्रोह गर्ने हैसियत अलिकति,पनि देखिएनः माधव नेपाल”